Mitandrema raha tafiditra ao anatin'ity lisitra ity ny teny miafinao iCloud. Vaovao IPhone
Vaovao IPad | | iCloud, iPad
Tao anatin'ny ora farany dia fitaovana vaovao iray izay heverina fa mahavita manapotika ny fiarovana an'i Apple amin'ny iCloud sy miditra amin'ny kaontin'ny mpampiasa no nitety ireo bilaogy sy tambajotra sosialy rehetra. Betsaka ny zavatra voalaza momba ny iDict, ny fampiharana apetraka, ary maro amin'izy ireo no diso, na farafaharatsiny tsy marina tanteraka. Tsy afaka maminavina ny teny miafin'iza na iza izy io, fampiharana fotsiny io mampiasa rakibolana misy tenimiafina 500 ary andramany tsirairay ireo mandra-pahatongany ao anatiny. Inona ny teny miafina tafiditra? Izahay dia manome anao ny fampahalalana rehetra etsy ambany.
Araka ny lazainay, tsy fampiharana mamela ny fidirana amin'ny kaonty iCloud na iza na iza izany, lavitra azy io. Izay mampiasa ny iray amin'ireo tenimiafina 500 azonao jerena ihany GitHub. Mila mahafantatra ny adiresy mailaka ampiasainao hidirana amin'ny iCloud koa ilay mpanafika. Ny fampiharana dia manandrana tsirairay ny tenimiafiko mandra-pahaizany miditra, ary raha tsy ampidirina ny teny miafinao dia tsy afaka hiditra amin'ny fomba rehetra izy. Saingy mifanohitra amin'izay lazain'ny bilaogy sasany, misy ny tsy fahombiazan'ny Apple, nanomboka tamin'izay ny fampiharana dia mahavita mandingana ny hidin'ny kaonty Inona no mitranga rehefa misy diso ny teny miafin'ny tenimiafina imbetsaka, ary tsy fantatsika ny antony, amin'ity tranga ity dia tsy mitranga izany, mamela ny fampiharana hanandrana hatrany hatrany mandra-pahatongany (na tsia) ny teny miafina marina.
Tamin'ny fotoana nanoratana ity lahatsoratra ity dia toa efa namboarin'i Apple ity bibikely ity ary mihidy ny kaonty, ka tsy atahorana intsony ny fampiharana. Na ahoana na ahoana, araka ny natorinay foana, dia tsara kokoa ny mampiasa teny miafina azo antoka ary tsara kokoa, ampandehanana ny Fanamarinana dingana roa an'ny Apple.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » Apple products » iCloud » Mitandrema raha tafiditra ao anatin'ity lisitra ity ny teny miafinao iCloud
Searchlight no tweak izay hahatonga ny Spotlight ho ilaina kokoa